Amabhethri aseKorea okuqala aphezulu kakhulu avela ngo-1952. Iningi lobuchwepheshe kanye nesipiliyoni saboleka eJapane, okuphathelene nalokhu kwakuqhubekile kakhulu. AmaKorea akha isitshalo se-Global Battery futhi aqala umjikelezo ophelele wokukhiqiza ukukhiqizwa kwamabhethri ukuze kusetshenziswe imishini elula neyindayo. Uma ubuka impendulo kubhethri "ye-Rocket", ungahle udideke. Emva kwakho konke, abanye bakhuluma ngekhwalithi ehloniphekile kanye nentengo, kanti abanye abashayeli babengajabuli kakhulu.
Ukubukeka emakethe yomhlaba
Isitshalo se-Global Battery sikhulu ngokwanele, futhi asiqashi amaKorea ayizinkulungwane, kepha noma kunjalo, ukuze kulethwe imikhiqizo emakethe yomhlaba, kwakudingeka uzame kanzima. Okokuqala, lokho okuthiwa iBettery Battery Technology Institute (TsIAT) yakhiwe. Ukuthuthukiswa okuyinhloko nokuhlolwa kwenziwa okwakhiwa kule sakhiwo.
Ngemva kokuvela kwe-CIAAT, amaKorea athola izitifiketi ezidingekayo, okwabavumela ukuba bathengise amabhethri abo emhlabeni jikelele, kuhlanganise naseRussia. Okwamanje, inkampani isakaza imikhiqizo yayo emazweni angu-140 emhlabeni jikelele. Futhi njengengxenye yokuqala "i-rocket" efakwe ku "Deu", "i-Volkswagen", "i-Kia" nezinye izimoto. Lokhu, okusho okungenani, kubonisa ukuthi ama-AKB anjalo azuzisa. Phela, impilo yabo yokusebenza ingaphezulu kwesilinganiso, futhi intengo ingaphezu kokungabizi, njengoba eziningi izibuyekezo zisho. Ibhetri elithi "Rocket" lilinganiselwe "isilinganiso samanani / izinga".
Ngomfushane mayelana nezici
Ukuze uthuthuke ngempumelelo endaweni enokuncintisana kakhulu, kubalulekile ukunikeza umthengi okuthile abanye abangakwazi. Kodwa kunzima ukubona lokhu. Yingakho udinga ukuzama ukwandisa ububanzi bakho, ukuze umthengi, kunoma ikuphi isimo, athola lokho akufunayo. Mayelana nalokhu, amaKorea akanayo izinkinga, ngoba anikela umthengi lokhu okulandelayo:
Inani elikhulu lamabhethri ngobukhulu;
Amandla amaningi (44-230 Ah);
Ukuguqulwa okuhlukahlukene (amabhethri angenasondlo, aphansi-yesondlo).
Ngokuqondene nesici esibalulekile njengamanje okuqala, amaKorea awavezi phakathi kwesisindo esijwayelekile, kodwa abangekho ngaphandle. Ibhethri enekhono lama-65 Ah e-Asia naseYurophu linamanje okuqala okulinganayo alingana no-580 A. Lokhu akukona okwanele futhi akwanele, kwanele ukuqala imoto ngisho naseqanda elibi.
Imoto ye-Accumulator "Rocket": ukubuyekezwa kwabathengi
Njengoba sekushiwo ngenhla, imibono yabashayeli ngebhethri ihlukaniswe. Ngenxa yalokho, impendulo ixutshwe, ngakho-ke kunzima ukuthola iziphetho.
Noma kunjalo, abaningi baneliseke kakhulu ngebhethri. Ngokuvamile kunezinzuzo ezinjengokuphila kwenkonzo ende, uphawu oluqinile oluvalwe uphawu oluqinile, oluqalayo okwamanje, nokunye njll. Uma ucabanga ngamanani entengo engaphansi kwezinga elijwayelekile, okuyinto, ngendlela ephindaphindiwe kugcizelelwe, lihle kakhulu Ibhetri. Lokhu kuvunyelwene nabashayeli abasha, abathengile ibhethri elithi "Rocket". I-Korea, ngokusho kokubuyekezwa, eminyakeni yamuva imise kakhulu ikhwalithi yemikhiqizo yayo, ngakho ibhethri ithengiswa kakhulu eRussia. Kodwa kudingeka siqonde ukuthi akekho oye wakhansela umshado wokukhiqiza, ngakho-ke amanye amacala okusebenza kabi kwebhethri entsha ayenzeka, nakuba kungavamile.
Enye yemininingwane ebaluleke kunazo zonke, okuyinto, ngeshwa, bambalwa kakhulu abantu abanakekele - impilo yesheluli yebhethri. Iqiniso liwukuthi uma ibhethri idlala entsha endaweni yokugcina impahla, lokhu akusho ukusebenza kwayo. Ngokuhamba kwesikhathi, i-element esebenzayo ilahlekelwa izici zayo futhi iqala ukuqubuka. Ibhethri izosebenza, kepha ngeke kwenzeke ukufezekisa ikhono elibikiwe. Ngakho-ke, kunconywa kakhulu ukuhlola unyaka nenyanga yokukhishwa ngaphambi kokuthenga. Uma ibhethri ikhulile kuneminyaka engama-3, kungcono ukuthi idlulise.
Ibhethri yemoto yaseKorea inephawu lokungajwayelekile kakhulu konyaka, inyanga nosuku lokukhululwa. Ngakho-ke, kubalulekile ukuhlala ngalolu daba ngokuningiliziwe. Isibonelo, ebaleni lebhethri sibona ukumaka okulandelayo: KJ5K16. Izinhlamvu ezimbili zokuqala azicatshangelwa, ngoba zibonisa idolobha elibhekiselwe ngalo ibhethri. Ezinhlanu kusho ukuthi umkhiqizo unyaka ka-2015. Okulandelayo ngu-K - inyanga yokukhiqiza. Ukubala kubalulekile ku-alfabhethi ukusuka ku-A kuya ku-L. Kuvela, kulokho lokhu ngoNovemba, ngokufanele, inombolo ye-16. Ibhethri elinjalo lingathengwa, ngoba kusukela ngesikhathi likhishwe lithatha iminyaka emibili, okuyinto engeyona uphawu olubalulekile. Ngokuvamile, akukho okuyinkimbinkimbi, kodwa kufanele uhlole njalo, ukuze kamuva kungabi namangalo kumenzi.
Ukushaja noma cha?
Abanikazi abaningi bemoto bakholelwa ukuthi uma ibhethri ingenasondlo, ayikwazi ukuvuselelwa. Kodwa akunjalo. Emva kwakho konke, uma kukhona izinkinga nge-starter noma ibhanti drive ye-generator bese usitshala ibhethri entsha, ungayilahli. Yingakho ungakwazi ukushaja amabhethri okungewona amasevisi "I-rocket", nanoma yikuphi abanye, ongakwenza. Kodwa lapha udinga ukwazi ezinye ze-nuances, ngoba uma ungahambisani nemithetho elula, ungonakalisa i-AKB.
Isimo esiyinhloko sisimanje esincane. Ngokujwayelekile okungaphansi, kungcono. Kunconywa ukufaka ishaja cishe ngo-3-4 A bese ushiya ibhethri ebusuku. Sicela uqaphele ukuthi kungenjalo kufanele uzame ukususa ikhava yebhethri ukuze uhlwithe amathini. Konke okufanayo, ngeke uphumelele, futhi ubuqotho buzovele buphukile. Umklamo wekhava wukuthi wonke ama-gesi aphuma ngopompi olukhethekile, futhi i-condensate yakha ama-drain emuva. Uma i-Rocket yebhethri isaphila, uma ushaja amahora angu-8 ngesikhathi samanje ka-3-4 A ugcwalisa ngokuphelele indawo yokugcina amandla futhi uzokwazi ukusetha.
Njengoba sekushiwo ngenhla, ubuchwepheshe obuningi babubolekwa kakade kulabo abanolwazi ngaleso sikhathi, amaJapane. Kungenzeka ukuthi lesi sici sidlala indima enkulu ekuthuthukiseni inkampani yaseKorea. Kodwa okuyisisekelo, empeleni, hhayi kulokhu. Into eyinhloko esiyikwazi ukuyizuza imiphumela emihle yizimpendulo ezihle eziningi zabanikazi. Ibhethri "i-Rocket" inebuchwepheshe "obuthunwe" ekwenzeni amapuleti. Futhi lesi sinkinga sidlulisela kakhulu impilo yomkhiqizo. Ibhethri elinjalo lingesabi ukwesulwa okujulile futhi alilahlekelwa amandla alo ngesikhathi esifanayo.
Indlela esetshenzisiwe yokupakisha ipuleti kanye nokubekwa kwabanqabile kuvunyelwe ukufeza amandla aphezulu. Ngenxa yalokho, ukudlidliza akuyona into embi kakhulu ye-AKB "Rocket". Ngokuvamile, ibhetri elihle kakhulu. Ukuthi kuphela kuphela ikhava ngesistimu ye-labyrinth. Amagesi aphuma, futhi amanzi abuyela emuva emanzini, konke kuhlanganisiwe okuvaliwe. Ukukhishwa ukuhlolwa kwabonisa ukuthi amabhethri emoto "I-rocket" ihamba ngendlela efanele emazingeni okushisa aphezulu futhi inikeze ngokwanele ukuqala kwamanje ngokuphansi.
Okwamanje, abakhiqizi abaningi baye bashintsha ngokuphelele ukukhululwa kwamabhethri angalindelwe. Lezi yizibhethri ezinjalo, ezifakiwe, futhi ngemva kweminyaka engu-3-5 yokusebenza zilahlwe. Phakathi nayo yonke impilo yebhethri, akudingeki ukwengeza amanzi. Kodwa kukhona "i-rocket" nebhethri yesondlo esincane. Lawa ngamabhethri adinga ukugcwalisa ngezikhathi ze-distillate. Esikhathini sehlobo, kuyadingeka ukuhlola izinga njalo, ngoba emazingeni aphezulu okushisa i-liquid iyashintsha.
Uchungechunge lwe-SM lungcono ngokuthi amaKorea akwazi ukunciphisa kakhulu inani lamagesi akhiwa ngesikhathi sokusebenza kwamakhemikhali ebhetri. Emzimbeni webhethri unesibonakaliso esikhethekile esibonisa izinga lamanje lokushaja. Ngakho-ke, ungakwazi njalo ukuqapha le parameter uphinde ulayishe ibhethri ngokuhamba kwesikhathi.
Okuncane mayelana namanani
Ngokuphathelene nezindleko, kungaphezu kokwamukelwa. Isibonelo, ibhethri yaseYurophu yama-40 Ah izobiza cishe ama-ruble angu-3 000. Kulesi simo, ibhethri ine-polarity ngqo no-340 A we-current start. Kuningi kakhulu ngisho nakakhulu kumali enjalo. Nakuba kungenakwenzeka ukubiza le nketho ibhajethi eyodwa kakhulu. Kodwa uma ucabanga ukuthi ibhethri elingama-65 Ah libiza kuphela ama-3,700 kuphela, alibizi kakhulu. Futhi, ezitolo eziningi kukhona isaphulelo esiphezulu, uma unikezela ibhethri yakho endala ngenkokhelo entsha, ngakho-ke ungongeza ngaphezu kwe-ruble engu-1 000.
Ibhethri "i-rocket", izici esesizicabangile ngazo, ngaphandle kokungabaza, kufanelekile ukunakwa. Lena ibhethri elingabizi futhi izinga eliphakeme kakhulu, eliqinisekiswa yizibuyekezo eziningi zabashayeli.
Kukhona i-AKB enikeziwe inokulimaza okukhulu, okuyinto yokuphila kwayo yesevisi. Kuwebhu ngalokhu kunezibuyekezo. Ibhethri elithi "Rocket" ngokuvamile lihlala iminyaka engaphezu kwengu-3, nakuba umkhiqizi kuthiwa eminyakeni engaba ngu-5. Noma kunjalo, iminyaka engu-3 akudingeki ukhathazeke ngokuthi imoto ngeke iqale ku-frost eqinile.
Ngakolunye uhlangothi, kukhona abashayeli abanamabhethri aseKorea iminyaka engu-5-7. Kungenzeka ukuthi okuningi kuxhomeke esimweni sobuchwepheshe sezimoto nemibandela yokusebenza. Noma kunjalo, uma sikhuluma ngokuthi kufanelekile ukuthatha ibhethri "i-Rocket", izibuyekezo zivame lokho okudingayo ukuzama, ngoba ithegi lentengo ayiyona enkulu. Noma kunjalo, "iDwala" lazitholela igama ngokwayo hhayi nje kulokho, kodwa ngekhwalithi yalo. Ngakho-ke, kufanelekile ukuzama ukubeka ibhethri elinjalo emotweni yakho, noma kunjalo, udinga ukhethe ngokucophelela umthamo ongakwanela emotweni yakho. Yilokho ongakusho mayelana nebhethri yaseKorea "iRotethi".
Escolar (butterfish): zokupheka athandwayo, izakhiwo ewusizo futhi umsoco
La Plata River (South America): incazelo, izici, izithombe
Ngolimi lwesiNgisi zokukhekheleza futhi ngempumelelo enkulu.